मङ्सिर १४ गते आइतबार - Baikalpikkhabar
मङ्सिर १४ गते आइतबार
श्री शालिवाहनीय शाके १९४२, ने. सं. ११४०, वि.सं. २०७७ साल मङ्सिर १४ गते आइतबार, २९ नोभेम्बर २०२० । कात्तिक शुक्लपक्षको चतुर्दशी तिथि १३ः०४ बजेसम्म, उप्रान्त पूर्णिमा, नक्षत्र कृतिका २४ः०० बजेसम्म, उप्रान्त रोहिणी, चन्द्रमाराशि मेष, सूर्योदय ६ः३५ र सूर्यास्त ५ः०८ बजे हुनेछ ।
समय उत्तम खालको छ । गुमेको धन प्राप्त होला । पढाइ लेखाइमा सन्तोषजनक प्राप्त हुनेछ ।
अधुरा सपना पूरा होलान् । पैतृक सम्पत्तिको झमेला अन्त्य हुनेछ । स्वास्थ्यमा समस्या आइपर्ला ।
समय राम्रो छ । विश्वास लागेको व्यक्तिबाट उचित सहयोग मिल्ला । सबैको मन जित्न सफल भइनेछ ।
समय उत्तम खालको छ । आर्थिक क्षेत्रमा सोचेभन्दा राम्रोे परिणाम आउला । मान्यजनको आशिर्वाद प्राप्त होला ।
नैतिक र सामाजिक काममा सफलता मिल्नेछ । तपार्इंले गरेको कामको सबैले प्रशंसा गर्लान् । आर्थिक लाभ होला ।
समय सामान्य खालको छ । माया–प्रेमको सम्बन्धमा धमिलोपन आउला । बोल्दा विचार पु¥याउनु होला ।
समय सामान्य खालको छ । साथीभाइ तथा इष्टमित्रबाट धोका होला । अनावश्यक काममा फसिएला ।
समय मध्यम् खालको छ । शिर तथा आ“खासम्बन्धी समस्या आइपर्न सक्छ । सवारी साधनको प्रयोगमा सावधान रहनुुहोला ।
समय मध्यम् खालको छ । तपाईंले गरेको कामको सबैले प्रशंसा गर्नेछन् । आर्थिक लाभ हुने योग परेको छ ।
धार्मिक र सामाजिक कामको लागि उत्तम समय छ । नयाँ कामको शुभारम्भ होला । कारोबार राम्ररी फस्टाउला ।
समय मध्यम् खालको छ । ढिलै भए पनि शुभ कामको शुभारम्भ होला । अरूको लागि सेवाभावमा लागिनेछ ।
समय उत्तम खालको छ । गुमेको धन प्राप्त होला । पढाइ लेखाइमा सन्तोषजनक प्रगति हुनेछ ।
आइतबार, १४ मंसिर, २०७७, बिहानको ०८:४६ बजे